Gaas: Alshabaab waan sifeyneynaa Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaas: Alshabaab waan sifeyneynaa Puntland
Mareeg.com: Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi balaaran oo uu hogaaminayey oo maalmahaan safar ugu maqnaa dalkaItoobiya ayaa maanta oo Axad ah dib ugu laabtay magaalada Garoowe.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa warbaahinta qeyba-heeda kala duwan shir jaraa’id oo uu kaga warbixinayo safarkii shaqo ee uu dalka dibadiisa ugu maqnaa ugu qabtay madaxtooyada Puntland ee Garoowe.
“Waxaan ka soo laabtay shirkii Tana Forum , shirkaasi oo sanadkiiba mar la qabto Puntland ay u tahay sanadkii labaad oo ay ka qeyb-gasho, waxaana isugu yimid shirkaa wadamo badan oo ay ka socdeen madaxda Geeska Afrika” ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxda dawaldda Itoobiya oo uu madaxweynuhu kulamo kala duwan la qaatay ayuu sheegay in ay uga wada hadleen sidii loo bilaabi lahaa isu socodka ganacsiga Puntland iyo Itoobiya oo meel wanaagsan maraya.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayso in maalgashi caalami ah laga samaysto Puntland islamarkaana ay yimaadaan shirkado ganacsi oo waaweyn.
Madaxweyne Gaas ayaa ciidamada Puntland ku bogaadiyey sii wadida dagaalka adag oo maamulku kulajiro al-Shabaabka ku dhuumaaleysta Puntland, waxaana uu sidookale tilmaamay in Puntland ay ka adag tahay adkaynta midnimada iyo amnigeeda.
Gaas ayaa sheegay in Puntland dhawaan deegaanadeeda la sifeyn doonto ragga Shabaabka ah ee ku sugan buuralleyda Galgala, kuwaasoo mararka qaar gala jidadka oo weeraro geysta.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii ilaa 7 ruux ay ku geeriyoodeen qarax lala beegsaday gaaru Qaramada Midoobay leedahay oo sii gelayey xarrunta hay’adda UNICEF ee Garowe.
Gaari qarax lagu raray oo laga raadinayo Baydhabo